May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၃၀)
ဆရာမရေ…မျှော်နေတာ ကြာပြီဗျို့….အခုမှပဲ ဖတ်ရတော့တယ်ဗျာ…အလုပ်များနေတယ် ထင်ရဲ့….၉၈ထဲမှာ RC1,2,3 နဲ့ main က လုံးလုံး ပိတ်ထားတာလား….အခြား သင်တန်းတွေ ဖွင့်ထားသေးလား….အဝေးသင်ဆိုတာတော့ စနေပြီ ထင်ရဲ့ခင်ဗျာ….ကျွန်တော်တို့ YIT မှာတော့ ညပိုင်း ဒီပလိုမာ သင်တန်းတွေ ဖွင့်တာမှတ်မိတယ်။ နောက် RC1,2,3 က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ဒုတိယနှစ်စာမေးပွဲကို အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ သွားဖြေရတာ မှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ခုနစ်ရက်ကျောင်းပြန်ဖွင့် ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေရတယ်။ နောက် တာဝ ဆိုတာကော အစပြုပြီလား (ကျွန်တော်ထင်တာတော့ မစသေးဘူးထင်တယ်)…အဲဒါ လေးတွေ ကွန်မင့်လေး ပြန်ရေးပေးပါခင်ဗျာ…ကျန်းမာပါစေ…
နောက်တခု ကျန်ခဲ့လို့ ဆရာမရေ…ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲတွေကို ဖြေပြီးတော့ main မှာ တက်ခွင့် ရတဲ့သူက ( honours ဝင်တဲ့သူလို့ ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်) မိန်းကလေးတွေ ချည်းလိုလို ဖြစ်နေတာ မှတ်မိပါတယ်။ မိန်းကလေးအများဆုံးနှစ် လို့တောင် သမိုင်းတွင်သွား ခဲ့သလားပဲခင်ဗျ။ ယောက်ျားလေးတွေ main ထဲ ပြန်ရောက်မလာအောင် မိန်းကလေးတွေ ကိုပဲ ဦးစားပေးခေါ်လိုက်တယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးလဲ ဆရာမ သိရှိသလောက် အတိုင်းအတာကို ဖြေကြားပေးပါဦးခင်ဗျာ။
ဆရာမရေ ကျနော်လည်း တခါက လမ်းမကြီးမှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ကူးခဲ့ဘူးတယ်။ ကားဆရာကသေချင်လို့လားမေးတာတောင် ကားရှေ့ကမရွေ့ပဲ ပြန်ကြည့်နေမိတယ်တဲ့။ ဘ၀ဆိုတာကို ဖြတ်သန်းရတာ တစ်ချို့အခါတွေက သိပ်ပင်ပန်းတယ်ဗျာ။ ကိုယ်မလုပ်တဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် စတေးရတာမျိုးဆို မခံချိမခံသာလေ။
ဖတ်ဖတ်မော ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာလား ဆရာမရယ်..
ရင်ဘတ်နဲ့ ဖတ်ပြီး နင့်နင့်သီးတီး(သည်းသည်း)ကို မောသွားတာပဲ..
(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ နောက်ပိုစ့်တွေလည်း မောလျှက်နဲ့
အမောတွေ ကူးစက်သွားတာမို့ဆရာမနဲ့ထပ်တူ ခံစားလိုက်ရပါတယ်... အပိုင်း ၃၁ ကိုလဲ
အချိန်ရတာနဲ့ဆက်ရေးပါအုံးနော်...
*** အဲဒီစာအုပ်လေး အိမ်မှာရှိတယ်...
လူ့ဘ၀မှာ တခါတလေတွေမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အချိန်တွေဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖတ်ပြီး ငါ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ လို့ ဆရာမ ပြောလို့ရပါပြီ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ချိုသင်းတို့ စင်ကာပူမှာမို့ ဆရာမ အဲဒီလောက် နေမကောင်းဖြစ်တာ တကယ် မသိလိုက်ဘူး။ ပြန်ဖတ်တော့ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းမိဘူး။
ညနေက တစ်ခေါက်ဖတ်တယ်.. ခုတစ်ခေါက်လာဖတ်တယ်..။
အဲဒီတုန်းက တို့က လွိုင်ကော်မှာ..
မေငြိမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေပြီ ဖုန်းတောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့.. သတင်းတွေရနေတယ်..
ကိုယ်တိုင်လဲ ကယားပြည်နယ် အပြင်ဖက် ထွက်မရ.. တော်တော် စိတ်ညစ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ပဲ.. မှတ်မိနေတယ်..
၁၉၉၈ ဟာ တို့ဘ၀မှာ တော်တော် စိတ်ညစ်ဖွယ်ရာတွေ ပြည့်နှက်နေခဲ့တာပဲ... တောင်မင်း မြောက်မင်း မကယ်နိုင်တွေလေ..
တို့တွေက ရာသီခွင်တူတွေဆိုတော့ တယောက် စိတ်ညစ်နေရင် ကျန်တယောက်လဲ မလျော့တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ မဟုတ်လား...
ဒါပေမယ့် တို့တွေ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်နော်...
အစ်မရေ ဖတ်ပြီး ရင်မောသွားတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရဲ့ ရိုင်းပင်းကူညီမှု၊ ရိုးသားဖြူစင်မှုဆိုတာ ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလား။ တစ်ဘက်က အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကို ထားလိုက်ဦး။ ဘာလို့ ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာ အမြီးကျက်၊ အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက်ခေါင်းစားလုပ်ချင်ကြတာပါလိမ့်။
တီချယ်ကြီးရေ ရွှေတိုးတော့ မနေ့ကမှ ၃၀ ကနေ စဖတ်ပြီး၊ ဒီနေ့တော့ ၁ ကနေ အစအဆုံး ဖတ်မယ်တဲ့။
သူတောင်ပြောနေသေးတယ်။ မိန်းထဲက အိမ်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ရောက်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် တီချယ်ကြီးက ခပ်မာမာ ဆိုတော့ ခုမှ သူ ဒီအကြောင်းတွေ သိတယ်တဲ့။
ဇာတ်က တကယ်နာရင် ဝတ္ထုထက်တောင် ဆိုးပါသေးလား။
အလွမ်းပြေ (၃၀) က တစ်စစီကွဲကြေနေတဲ့ ဘ၀အမောတွေကြားထဲကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်..
လောကထဲ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာကိုယ့်အနားရှိသူတွေသာဘ၀မှာမိတ်ဆွေစစ်လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား
အဲဒိထဲမှာ ရာကျော် ဆိုတဲ့အိုအေစစ်ငလေးတစ်ခု ကိုစာဖတ်သူတွေလှမ်းမြင်ခွင့်လိုက်ရတယ်..ကြည်နူးစရာပဲ
This is3times I read this post.
It so hurt and i don't know how to say.
In our life, we can't avoid some part eventhough we don't way to say or dream again. But u can pass it.
I do wait for 31.
Sayama yay, haveanice day naw.
၀င်ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း ထုံးတို့တာပါ။
ကော်မန့်မှားနှိပ်မိလို့ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ အထဲရောက်သွားတော့ နည်းနည်း ကြောင်သွားသေးတယ်။ ဆက်ရေးပါခင်ဗျား...။